एकीकरणको शुभकामना « Loktantrapost
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १६:४५
पहिलो र तेस्रो दुई ठूला राजनीतिक दलहरु एकीकरण भएसँगै देशको राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएको छ । देशमा अब दुईवटा मात्र ठूला दलहरु रहेका छन् । ३३.२५ प्रतिशत पपुलर जनमत बोकेको नेकपा एमाले र १३.६६ प्रतिशत पपुरल जनमत बोकेको एमाओवादी एकीकरण भएर ४६.९१ प्रतिशत पपुरल जनमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ भने ३२.७८ प्रतिशत पपुरल जनमत बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको छ ।
विश्वका विकसित देशहरुमा मुख्यतया दुईवटा पार्टीहरु नै अस्तित्वमा रहने गरेका छन् । त्यसैले जनताले कुन पार्टीले ४÷५ वर्षभित्रमा कति राम्रो काम ग¥यो, हेरेर मतदान गरिदिन्छन् । राम्रो काम गर्नेलाई विजयी बनाएर पुरस्कृत गरिदिन्छन् भने नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गरिदिन्छन् । तर, हाम्रो देशमा त पार्टी नै पार्टी भएकाले कुन पार्टी राम्रो कुन पार्टी नराम्रो भन्ने छुट्याउन जनतालाई कठिनाइ भएको थियो । सबै पार्टी आफ्ना डम्फू बजाइ रहन्थे । २÷४ सिट बोकेर सत्ताको झिना झपेटीमा आफूलाई सदैव अगाडि बढाउने मुसा प्रवृत्ति हावी थियो । अब उक्त प्रवृत्ति लगभग अन्त्य भएको छ । त्यसैले अब मुलुकले विकासमा गति लिन्छ र देश आर्थिक सवृद्धिको बाटोमा लम्किन्छ भन्नेमा जनता आशावादी छन् । विश्वका जुनसुकै पेशा वा व्यवसाय भन्दा पनि राजनीति गर्न कठिन छ । झुपडीदेखि महलसम्म, मजदुरदेखि मालिकसम्म सबैलाई रिझाउनु पर्छ । सबैलाई मनाउनु पर्ने भएकाले नै यसलाई नीतिको पनि नीति राजनीति भनिएको हो । त्यसैले राजनीतिमा जनभावना शान्ति, एकाग्रता, विनम्रता हुनु जरुरी छ । आज विनम्रताले नै ठूलाठूला परिवर्तनहरु भएका छन् तर दम्भले सदैव जलन दिन्छ । अहङ्कारको वृक्षमा विनासको फल पाक्छ । सर्वसत्तावादले विनासको बाटो निम्त्याउँछ । राजा ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादको अहङ्कारले २४० वर्षीय राजतन्त्र अन्त्य भएर गयो । २०४८ सालको चुनावमा ११४ सिटको बहुमतसहित विजय हासिल गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा दोस्रो पार्टीमा परिणत भयो । २०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा पहिलो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादीमा आएको दम्भको कारण दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो । २०७४ सालको चुनावमा सरकारको नेतत्वसँगै चुनावमा होमिएको नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव अगाडि लिएका कतिपय गलत निर्णयको कारण ऊ प्रत्यक्ष चुनावमा तेस्रो र समग्र मतमा दोस्रो स्थानमा पुग्यो । यसले के देखाउँछ भने सफलतालाई जोगाइ राख्न सकिएन र दम्भ देखायो भने असफलता हात लाग्न बेर लाग्दैन । त्यसैले अहिले पाएको सफलतालाई नव गठिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब दम्भको राजनीतिलाई त्यागेर एकता, निष्ठा र विनम्रताको राजनीतिमा आफूलाई अग्रसर बनाउनु जरुरी छ ।
नेपाल भन्दा पछि स्वतन्त्रता र स्वाधिनता पाएका देशहरु आज विकसित देशको रुपमा अगाडि भइसक्दा पनि हाम्रो देश अझै पनि अल्पविकसित देशको रुपमा रहनु निश्चय पनि दुःखको कुरा हो । राजनीतिक अस्थिरता र स्वार्थको राजनीतिले देशलाई अहिलेसम्म तङ्ग्रिन दिएको छैन । १०४ वर्षीय राणा शासन, ३० वर्षीय राजा शासन र १० वर्षीय राइफल शासनले मुलुक आक्रान्त बनेको छ । अब भने असली जनशासन सुरु हुनु जरुरी छ । आज विकसित देशका सडकहरुमा आफ्नै छाँया टल्कदै गर्दा हाम्रो देशका सडकहरुमा धुलो र हिलो छचल्किएका छन् । दशौँ चोटी शुद्धिकरण गरेर विकसित देशका नागरिकहरुले खाना खाँदै गर्दा हाम्रो देशमा पखला लाग्दा जीवन जल र ज्वरो आउँदा सिटामोल नपाएर जनताहरु मरिरहेका छन् । अब त्यो युगको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
एकतालाई विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेका छन्, गरिरहने छन् । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि नेतृत्वले राम्रो आलोचनालाई आत्मसात गर्दै उक्त आलोचनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु जरुरी छ । के १२ वर्षे जनयुद्धको औचित्य सकिएको हो त ? एकता पछि सबैभन्दा बढी तेर्सिने प्रश्न हो यो । त्यसैगरी १३.६६ प्रतिशतको पपुलर मत मात्र प्राप्त गरेको एनेकपा माओवादीलाई लगभग बराबरीको हिस्सा दिएर एकीकरण गरेको कारण के अब जबजको औचित्य समाप्त भएको हो त ? भन्नेहरुको पनि कमी छैन यहाँ । यी दुवै प्रश्नको उत्तर दिन नेकपाका सह अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले जरुरी छ ।
दुई ठूला दलहरुले एकताका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर घोषणाको दिन स्व. मदन भण्डारीको स्मृति दिवसलाई बनाएका छन् । छोटो समयमा जनताद्वारा रुचाइएका मदन भण्डारीप्रतिको सम्मान हो यो । तर, सँगसँगै नव गठिन नेकपालाई मदन भण्डारीको मृत्यु वा हत्याको सत्यतथ्य छानविन गर्ने दायित्य थपिएको छ । मुलुककै ठूलो दल जुन उनी मदन भण्डारीको सिद्धान्तमा चलिरहेको छ, उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनु र उनीकै श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी राष्टूपति हुनु मदन भण्डारीको मृत्युको घटनालाई छानविन गर्ने यो भन्दा उपयक्त समय अरु कुनै हुन सक्दैन । त्यसैले नवगठित पार्टीको लागि यो पहिलो चुनौती हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब सच्चिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । अब व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति भन्दा पनि जनताका लागि राजनीति गर्दा मात्र आउँदा दिनहरु काङ्ग्रेसका लागि सहज हुनेछन् । फेरि दुई ठूला दलहरु एकीकृत भए भन्दैमा अरु साना दलहरु भेला गरेर ठूलो दल बन्न खोज्यो भने पनि त्यो उसका लागि घातक बन्न सक्छ । विगतमा गरिएका कतिपय गलत निर्णयलाई सच्याउन जरुरी छ भने अब गरिने निर्णयहरुलाई सोच विचार गरेर गर्नु पर्दछ । अब काङ्ग्रेसले जनताको हृदयलाई छुने खालका जनमुखी कार्यक्रमहरु लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ । त्यो नै काङ्ग्रेसको हितमा हुनेछ । तसर्थ, एक्काइसौँ सताब्दीका जनता के सही के गलत छुट्याउन सक्ने भएका छन् । राम्रो गर्नेलाई जनताले मतदानमार्फत पुरस्कृत गर्नेछन् भने नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नेछन् । जनतासँग सबै सचेत हुन जरुरी छ । नवगठित पार्टीलाई एकताको शुभकामना ।